Puntland Oo Somaliland U Soo Gacan Gelisay Nin Dil Ka Gaystay Gobolka Sanaag | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Puntland Oo Somaliland U Soo Gacan Gelisay Nin Dil Ka Gaystay Gobolka Sanaag
Published on September 30, 2016 by sdwo · No Comments
Ceerigaabo (SDWO.com): Maamulka Puntland ayaa maanta dawladda Somaliland ku soo wareejisay nin gacan ku dhiigle ah oo shan maalmood ka hor nin ku dilay meesha loo yaqaano Goofka oo ka tirsan gobolka Sanaag.
Wasiiru dawlaha amniga ee wasaaradaha Somaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa kala wareegay odayaasha beesha uu ka dhashay gacan ku dhiiglaha, iyadoo ay iyagana u soo dhiibeen maamulka Puntland.
Ninka dilka gaystay oo magaciisa la yidhaahdo C/xakiin Sooyaal, halka marxuumka dhintay-na magaciisa la odhan jiray Jimcaale Saleebaan Xasan. Waxaana la sheegay in kadib markii uu dilku dhacay in uu u baxsaday dhinaca Puntland, hase yeeshee xukuumadda Somaliland iyo odayaasha beesha gacan ku dhiigluhu ay maamulka Puntland kala kaashadeen sidii ninkaasi loogu soo gacan gelin lahaa.
Marxuumka dhintay iyo ninka dilka gaystay ayaa la sheegay inay ka wada shaqaysan jireen shidista Dhuxusha, hase yeeshee khilaaf iyo dagaal dhexmaray kadib uu sababay in ninkaasi uu geeriyooday.
Wasiiru-dawlaha amina wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Muuse Diiriye, oo arrintaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay si weyn ugala shaqeeyaan soo qabashadda gacan ku dhiiglaha maamulka Puntland, oo dhinaca Puntland u baxsaday ka dib markii uu dilka gaystay, hase yeeshee ay Puntland iskaakaashadeen soo qabashadda gacan ku dhiiglaha.
Waxaanu yidhi “Gacan ku dhiigluhu markii uu dilka gaystay wuu ka gudbay xuduudka Somaliland, waxaanu u baxsaday dhinaca Puntland, kadib waxaa loo soo xidhay dad ehelkiisa ah. Dilku wuxuu dhacay 5 cisho ka hor. Dawladu waxay qaaday baadigoob lagu raadinayo soo qabashadda gacan ku dhiiglaha, si aan shaqaaqo kale u dhicin.
Waxaana nagala shaqeeyay oo xil weyn iska saaray odayaasha beesha gacan ku dhiiglaha, oo aan mar qudha ka nasan, lana hawlgalay ciidamadda qaranka, laakiin gacan ku dhiigluhu wuu ka gudbay xuduudka Somaliland, waxaanu galay Puntland”.
Waxa kale oo uu sheegay in Somaliland iyo Puntland uu ka dhexeeyo iskaashi dhinaca amaanka ah, sidaas darteed-na ay Puntland ugu soo wareejisay Somaliland gacan ku dhiiglaha. “Puntland iyo Somaliland, waxaa ka dhexeeya iskaashi dhinaca amniga ah, sidaas darteed gacan ku dhiiglihii oo ay qabteen ayay noo soo gacan geliyeen, sidii ay Somaliland-ba hore ugu wareejisay, gaadiid dawladeed oo lagala soo baxsaday Puntland iyo gacan ku dhiigleyaal dilal ka soo gaystay gudaha Puntland.
Gacan ku dhiiglihii hadda dawlada ayaa gacanta ku haysa, dadkii hore kiiskiisa loogu soo xidhayna, waa la siidaynayaa” ayuu yidhi Maxamed Muuse Diiriye.
Dhinaca kale odayaasha labadda beelood ee ay ka soo kala jeedeean gacan ku dhiiglaha iyo odayaasha dhibanaha oo kadib markii ay soo qabteen gacan ku dhiiglaha u soo gacan geliyay xukuumadda Somaliland oo hadallo ka jeediyay goobtii ay ku wareejinayeen gacan ku dhiiglaha ayaa soo dhaweeyay soo qabashadda ninka dilka gaystay.
Waxaanay odayaasha beesha uu ka dhashay gacan ku dhiigluhu warameen sidii ay ugu suurto-gashay inay ku soo guulaystaan soo qabashadda ninka dilka gaystya.
Chief Caaqil Maxamed Cabdi Soofe, oo arrimahaasi ka hadlay waxa uu yidhi “Mar haddii ninkii la hayo, dhibaato kastoo dhacday, waa mahad ILLAAHAY, oo aanay dadkaa is-dhalay, ee ehelka ah, fidmo dhex marin. Meel kasta waa laga gurmaday, sidii ninkaasi loo soo qaban lahaa”.
Sidoo kale Chief Caaqil Ismaaciil Aadan Cabdi, oo isna ka hadlay soo qabashadda gacan ku dhiiglaha, waxa uu yidhi “Mar haddii gacan ku dhiiglihii la soo qabtay waa IllAAHAY mahaddii. Ninkii dilka gaystay waa la soo qabtay, dawladda Somaliland ayaana lagu wareejiyay. Sidii ay dawladu ku taliso ayaanay inoo ahaanaysaa”.